Ebe nchekwa nchekwa Fossa nke Ubuntu 20.04 LTS - Enwere ike Linux
Tuesday, January 25, 2022 by Jọshụa James
UNRAR bụ nke amaara ma jiri ya mee ihe n'etiti ndị ọrụ Windows. Faịlụ RAR bụ ebe nchekwa dị obere ma na-akpakọ karịa ZIP maka ọtụtụ faịlụ site na ịpịkọta faịlụ “ọnụ,” na-echekwa ohere karịa. UNRAR abịaghị etinyere ya nke ọma na Ubuntu, mana ọ dị maka ịwụnye na ebe nchekwa ya. Nkuzi na-esote…
Categories Ubuntu Tags Ngalaba Microsoft, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Wụnye & Hazie Gitlab na Ubuntu 20.04 LTS
Tuesday, January 18, 2022 Mọnde, Jenụwarị 17, 2022 by Jọshụa James
GitLab bụ ebe nchekwa koodu dabere na ebe nrụọrụ weebụ n'efu maka mmepe ngwanrọ maka DevOps, edere n'asụsụ mmemme Ruby na Go. Isi okwu GitLab bụ "Weta ọsọ ọsọ na ntụkwasị obi, nchekwa na-enweghị ịchụ aja, yana visibiliti n'ime ihe ịga nke ọma DevOps." Ọ bụ ihe ọzọ ama ama na GitHub na-enye wiki, nleba anya, na ntinye na-aga n'ihu na…
Categories Ubuntu Tags gitlab, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
Linux kernel 5.16 nwere ọtụtụ atụmatụ ọhụrụ, nkwado na nchekwa. Mwepụta kernel Linux 5.16 nwere ọmarịcha FUTEX2, ma ọ bụ futex_watv (), nke na-achọ imeziwanye ahụmịhe egwuregwu Linux, na-eto nke ọma na ọdụ ụgbọ mmiri Linux ka mma maka egwuregwu na-agba Windows site na iji mmanya. Mmelite ndị ọzọ ahụla…
Otu esi etinye ngwa VMware (Ngwaọrụ OpenVM) na Ubuntu 20.04 / 22.04 LTS
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịwụnye desktọpụ Ubuntu ma ọ bụ ihe nkesa na igwe mebere. Agbanyeghị, ị nwere ike ịchọpụta na nzikọrịta ozi n'etiti onye ọbịa na igwe VM adịghị. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ nkesa ugbu a na-ebu ngwa VM mepere emepe nke enwere ike iji maka ọtụtụ ndị ama ama…
Esi Wụnye 3.11 Python na Ubuntu 20.04
Sunday, November 21, 2021 Wednesday, November 17, 2021 by Jọshụa James
Python bụ otu n'ime asụsụ ọkwa dị elu ama ama, na-elekwasị anya n'ọkwa dị elu yana ngwa dabere na ihe sitere na mpempe akwụkwọ dị mfe gaa na algọridim mmụta igwe dị mgbagwoju anya. Eke Ọgba bụ ama maka nfe, dị mfe ịmụta syntax, na-emesi ike ịgụ ihe, ma na-ebelata ọnụ ahịa mmezi mmemme yana ngbanwe kwụ ọtọ na mwepụta ọhụrụ. Python na-akwado modul na ngwugwu. Otu…
Categories Ubuntu Tags Python, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa
XanMod bụ n'efu, ihe mepere emepe Linux Kernel ọzọ maka kernel ngwaahịa na Ubuntu 20.04 LTS. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata ma dịkwa mma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. XanMod bụ ama ama n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ…